‘Durba miyaad illowdeen’ (U-hiili Hubaal, haddii aad wax hadayso)
You are here: Home Home ‘Durba miyaad illowdeen’ (U-hiili Hubaal, haddii aad wax hadayso)
Hubaal waa wargeys maalinle ah. Mataankeedu waa ‘Independent’ oo toddobaadle ah. Waa mid ka mid ah kuwa akhriskooda loogu jecel yahay. Ma gabbato. Ma gaabsato. Gefka kuma dheerayso, danta guudna waa ay ku goohdaa. Waa lagu gabbood-falay.
‘Durba miyaad illowdeen’
(U-hiili Hubaal, haddii aad wax hadayso)
“Garan maayo maalmaha intuu,
Mar hadduu gidaad bahal qabaa,
gaajo kula ciiro,
Waxba kama go’aan ruux ku shubay,
Hadduu gaar u maamulo qof waa,
geel nin leeyahaye,
In kastoo gantaal iyo wed iyo,
gawrac lagu hooyo,
Meel loo gun-raaciyo haddaan, gogol dhig loo yeelin,
Mar haddaan garaad loo lahayn, wayska gubataaye,
Geedkeed ba’waa sixir haddaan, garasho liilayne,”
Maansadii Gudgude ee Hadraawi, 1990kii
Hubaal waa wargeys maalinle ah. Mataankeedu waa ‘Independent’ oo toddobaadle ah. Waa mid ka mid ah kuwa akhriskooda loogu jecel yahay. Ma gabbato. Ma gaabsato. Gefka kuma dheerayso, danta guudna waa ay ku goohdaa. Waa lagu gabbood-falay. Hal-gaad iyo gaadmaba gacan baa loo geystay. Garteeda lama niqin, eeddii laga galayna lama gorfayn. Geddafada ciddii geysatay hawsheeda lama gelin. Eedeysane ahaan loo garbo-duub, qudhiisuna gar-sugannimada ku raag oo xaqiisii lagu gabbood-fal. Eedda waad gashay iyo ma aad gelin midna lama odhan. Isaguna gef buu tirsanayaa garna waa uu u leeyahay. Waa bar gaashaysan oo guudka inagaga taal. Garsoorkeenna, gar-naqsigeenna iyo geeddi-socodkeennaba waa waxa gaasiray. Waa gasariirka xaalkeennu yahay. Waa wax aynaan galabsan ee cid horumarkeenna iyo deggenaanshaheenna u gol lihi ku goohday kuna guulaysatay. Gees kasta marka aan ka joogsado, waxaan ka wadi waayay tuduc ku jiray maansadii Gar-naqsi ee Gaarriye, kaas oo ahaa:
Raalli iga haada. Sheekada ayaa ila taraartay. Show goorahanba waxa I sugayay saaxiibbadeen Kadeed iyo Kulan. Waxaan is-idhi xalay ayay fadhigii ku raageen oo hamaansiga iyo jimicsiga waad yaabaysay. Shaahoodii ayay dalbadeen iyaga oo is-hordhigay sigaar uu midkoodba gaar ula soo baxay. Waxaan is-idhi dhoolla-tus ayay hor dhigay sigaar aan sidaas u sii badnayn. In kasta oo ay saaxiib yihiin, haddana wada-socodkooda hoos-ka-tuur iyo xifaalaba waa uu weheliyay. Waa halkii Dhoodaan e’: “Is-waab waabin fudud bay ahayd, oo walaalnimo.”
Haasaawe aan badnayn ayay bilaabeen.
Kulan: Saaka maxaad war-haysaa?
Kadeed: Dee horto arrintii Hubaal waa iska taagan tahay oo qufulladii ayaa ku jabsan. Waxa se kale oo cusub diblomaasiyiin Ingiriis ah oo la yidhi afka Talyaaniga ayay ku hadlaan oo magaaladii iyo xukuumaddiiba ka dhammaan la’. Waxaan u jeedaa safiirrada dhalasho ahaan Ingiriiska ah ee qaabbilsan Somaliland iyo Soomaaliya,
Kulan: Ma waxaad u jeeddaa Mat Bough iyo Nicolas Kay-gii labada maalmood ee isku xiga inoo yimid?
Kadeed: Haa, caqliga ha waayin oo weliba aan filayo in ay labaduba calool-xumo inagala tegeen,
Kulan: Horto calool-xumadooda awalba cuud iyo caano midnaba kuma aynu qabin. Ta labaad nimankani laba dal safiirro kama aha ee Soomaaliya ayay ka yihiin. Innaga ayaa isku maaweelinna ‘Iyo Somaliland-tan’ aynu xagga dambe ka raacinno. Siyaasad-gariir dibadeed ayaa inagu dhacday. David Cameron waa aynu diidnay marti-qaadkiisii. 28kii iyo 29kii Juunna waxaynu Nayroobi ku hadhsanaynay labadii Shabeel ee Soomaaliya, maalin aan fogaynna waxa suurto-gal ah oo ay weliba u badan tahay innaga oo suke ah in aynu shirka Buruxelles ka qayb-galno oo mar kale sideennii labadii Shabeel hadhsanno. Marka ay halkan inoogu yimaaddaan go’a ayay xukuumaddeennu u riddaa si ay ma-kastu ugu seexato. Dibadaha marka aynu u baxnana waxa la soo sheegaa in shirarka qarsoodiga ahi ka badan yihiin kuwa badheedhka ah. Ilaah inoo sahla waa aynu leenahay.
Kadeed: Hadhsigaa dhacye, waxaan ka yaabbanahay mowqifyadan ku-soo-booddada ah ee aan laga fiirsan ee aan weliba qoraallada lahayn ee ay Xukuumaddani sida fudud ugu tallaabsanayso,
Kulan: Oo show nin sidaa u sii qodanba ma tihid. Waar Xukuumaddani adduunka oo dhan ayay ka horreysaa oo qoraalladan iyo waxaa iskumaba dhibto. Shir-jaraa’id oo yar oo gole-ka-fuul ah ayay jac ka siisaa, ka dibna inta ay go’eeda ka hurgufato ayay iskaga dhaqaaqdaa meesha. Raad-raac haddii aad is-tidhaahdana meel aad ka doontaba heli meysid. Waa diblomaasiyadda iyo siyaasad-wanaagga aynu adduunka dheer nahay,
(Yarkii shaaha u dhigayay oo Hubaal hadal-haya ayaa u imanaya oo ay ku odhanayaan mar labaad noogu soo celi ama: “Aar walaalkaday noo soo lammad.” Yarkii dhaqaaq oo shaahii u doon.)
Kadeed: Sheekadii siyaasad-gariirka dibadeed ayaa inagu dheeraatay e’, waxba Hubaal iyo sababaha loo qufulay war ma ka haysaa?
Kulan: Iyaga iyo Allahood e’, waxa la isla dhex marayay meel aan la taaban ayay gacan-togaalaysay,
Kadeed: Oo meeshaasi maxay ahayd?
Kulan: Maalinta Qiyaame la ii ma soo joojiyo e’, balaf waxaan ku maqlay waxay gacanta yar gelisay Madaxtooyada, waayaheeda nololeed iyo qaababka xilalka loo wadaago ama loo gutaba,
Kadeed: Waar wararka iyo sheekooyinka iskuma aynaan caansiirin jirin e’, si hufan wax iigu sheeg,
Kulan: Oo anigana quful ‘Reyfal’ ah la igu jebiyaa, oo godka Hubaal lagu riday la iigu geeyaa. Halkaa u dhaafi maayo. Waxaan intaa kuugu kabayaa in ay arrintani Madaxweynihii aad uga cadhaysiisay,
Kadeed: Haa gartay. Waa cadho Madaxweyne ka kacday. Oo ninyow xeerarkeenna meelna miyay kaga qoran tahay in aan Madaxweynaha laga cadhaysiin, laga qoslin amaba lala kaftamin,
Kulan: Ma ciyaar iyo bay ahayd tii shalay. Selel ayaa afar gool dhalisay. Mar keliya ayaa ‘tiribuunkii’ isla oogsaday. Bahal Seyliciya ayaaba la is-laba rogay. Waa maxay barbaarta is-guratay. In ay weligoodba wada ciyaari jireen ayaad moodaysay,
Kadeed: Hadma ayaynu taaba haynay. Oo xaggaad ii la beydhay?
Kulan: Mid baa ina yar dul joogsaday oo aan go’a u ridayay e’, wargeysyadu waxay u jiraan in ay dadka wax baraan, dawladdana tilmaamaan, waa se, qof iyo garashadii. Oo sow tii aan ku moodayay in aad maansooyinka Gaarriye dusha ka wada haysay. Miyaanad xusuusan: “Istaaqfurulla waa been, Injirtii war sheekadu, Yay ina af-qaadin e’,”
Kadeed: Aniga sidaas ilama aha oo, Madaxweynaha dalka ka taliyaa waa nin soo halgamay af iyo addinba. Ma ninkii muddaaharaaddada ku baaqi jiray, aloosi jiray ee hoggaamin jiray ayaad I leedahay maanta oo uu taladii dalka hayo, ayuu hadallo wargeys qoray ka xanaaqayaa. Waaryaahe: “Giib noom taani.”
Kulan: (Cod aad u hooseeya ayuu ku odhanayaa) Ninkii markii ina dul taagnaa ma garanaysaa, waa kaas gaadhiga Mark II-ga ah ee buluukiga ah inaga soo eegaya e’, waa inoo Judh-Yudhii. Ha I soo raacin e’ xaggan ayaan ka baxayaa, adiguna xaggaa iyo shacabkii u bax,
Kadeed: Shacabkee dee! Oo tilifoon la iga sii hor diraa oo la I hor-qabateeyaa. Waar xaggaa iyo Gol-janno ayaan u kacayaa haddii aanan Caakaaraba u kala xeelin,
Alla dadku illowsho dhawaa. Ibraahin-gadhle maansadiisii dheereyd ee Dir-sooc ayaan soo xusuustay. Idinka oo dherer iyo dhumucba wixii ay lahayd ka dheehan doona Diiwaanka Mullaax bal hadda aan idiin ka soo qaado laba qaybood oo qaybta hore tahay ‘Durba myaad illowdeen’, waxaanu Ibraahin-gadhle ku ballaysimayaa maansadiisan hodanka ah, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’: “Durba miyaad illowdeen.” Maalinta uu tirinayaa maalmaha kuma jirto oo waa 6dii Abriil 1990kii. Madashu mid tilmaaman oo dhiggeedu noloshaba ku yaraa ayay ahayd oo waa Shirweynihii 6aad ee Caadiga ahaa ee SNM. Waa magaalada Balli-gubadle meel wax yar woqooyiga kaga beegan.
Ibraahin Sheekh Saleebaan, wuxu maalintaa ku bilaabay:
Maansadii Dir-sooc ee Ibraahin-gadhle ayaynu ka soo qaadanaynaa tuducyo ay tahay in aynu wax ku qaadanno.
Qaybtan aan manta soo qaadanayo, Ibraahin Sheekh Saleebaan, wuxu maalintaa ku bilaabay:
Durba miyaa illawdeen,
Jeel u daaddahayntii?
Wada koray dadweynuhu,
Keligaa deg kugu yidhi,
Maalintaad u deni tahay,
Dusha sare ka soo tuur.
Haro daafta joogtiyo,
Isagoo ku jira daad,
Kii harraadka kugu dilay,
Marka roobku kuu da’o,
Docda adiga kuu yaal,
Is-na kalaxa haw darin.
Deebaaq qadhaadh iyo,
Dalqadaba wax aan gelin,
Kii durduuro kugu yidhi,
Dacar inad u qooshtay,
Duhur kuu badheedhee,
Dib-u-rooti kuu dhigay,
Libta looma daayee,
Inad kaga dambaysay,
Dabin ruuxi kuu dhigay,
God dheer kuu dallaallimay,
Dibin-daabyo kula jecel,
Isagana dab nool ood,
Dambas ugu hagoogtiyo,
Digo inad u qarisay,
Daartaada kii riday,
Inaad kiisa dumisay,
Wuxuu ruuxba kugu dayo,
Adiguna ku daw-mari,
Dubbaa lagugu jiidiyo,
Ha yeeshee dul-qaadkiyo,
Waa dariiqo kuu furan,
Sharciguna ma diiddana.
Hadduu daammur kaa kale,
Dusha uu iskaga shubay,
Adiguna tu doofaar,
Isku daadi kuma odhan.
Xumo xumo ku daahiri,
Yaan doodda laga dhigin.
Doqon iyo nin liitiyo,
Yaan jaahil lagu dayan,
Dab Munaafaq uu shiday,
Yaan Muumin lagu gubin,
Dugsi ma leh qabiilkuye,
Yaan dallaayad laga dhigan,
Waryaan Dir iyo Daarood,
Lagu sirin dadweynaha.
Dacar dhiilka lagu shubay,
Malab uga dambaysii,
Dembigana ninkii galay,
Keligii dusha u saar,
Duul aan baraarugin,
Dembi ruuxi laga galay,
Intuu ololku dami laa,
Daantaa wixii jiray,
Dabayl xaadhay weeyaan,
Waxa daanta kale yaal,
Daad ha qaado weeyaan.
Runtu daahir yaa Shamis,
Diintoon u noqonniyo,
Dembi maydhis weeyaan,
Ku dareerro weeyaan.
Darka nimanka joogow,
Ceelka aan la darin weel,
Ummad lagama doojee,
Isla doonta weeyaan,
Debedaa kuwaa wadhan,
Dugsi geeya weeyaan,
Dix u raadsha weeyaan,
Ka ku jira dagaalkow,
Dantaad adigu leedahay,
Mid kasii da’weyn ma leh,
Haddaan aqallo kaa dumin,
Is-na daari kama dhicin,
Haddaan dahab lagaa guran,
Is-na Doollar kama lumin,
Haddaan layna dili jirin,
Is-na lama dagaalayn,
Waa kaa dardaarankii Ibraahin Sheekh Saleebaan oo Gadhle loo yaqaannay. Naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo. Innagana Ilaahay ha inaga dhigo kuwii wax ku qaata ee aan dib u marin saymihii iyo saxariirkii ay hore u soo mareen.